Otu esi etinye ma jiri Telnet na Fedora 35 - LinuxCapable
Otu esi etinye ma jiri Telnet na Fedora 35
November 6, 2021 by Jọshụa James
Ịdọ aka ná ntị gbasara iji Telnet
Jikọọ na Telnet gị
Nhọrọ. Tọọ Iwu Firewalld
Otu esi ewepu (wepụ) Telnet
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi etinye Telnet na Fedora 35 sistemụ arụmọrụ.
Site na ndabara, ebe nchekwa Fedora 35 na-abịa Telnet ngwugwu dị iji wụnye site na iji njikwa ngwugwu dnf.
Ka ịtọlite ​​​​iwu ikike ịbanye FirewallD enwere ike ime ya n'ụzọ dị iche iche. A na-atụ aro nke ukwuu inye ihe IP nke ejikọta ihe nkesa naanị ma ọ bụrụ na na budata njọ na netwọk. Ahapụla ọdụ ụgbọ mmiri 23 na-emeghe ihe niile, na nke a ga-eduga na brute ike mgbalị.
Nke mbụ, gbakwunye mpaghara raara onwe ya nye maka iwu Telnet firewalld:
Na-esote, kọwaa adreesị IP anabatara nke enyere ikike ịnweta ihe nkesa Telnet.
Ozugbo ịmechara ịgbakwunye adreesị IP, mepee ọdụ ụgbọ mmiri Telnet. Site na ndabara, nke a bụ TCP ọdụ ụgbọ mmiri 23.
Ugbu a ị melitela a FirewallD iwu ka ị nwee ike ijikọ na sava dịpụrụ adịpụ gị Telnet, jiri ihe ndị a (Telnet) iwu:
Iwepu Telnet site na sistemụ arụmọrụ gị, naanị ihe ị ga - eme bụ iji iwu a:
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi etinye ya, guzobe iwu firewall, wee jikọọ na sava dịpụrụ adịpụ site na iji Telnet.
N'ozuzu, n'ụwa nke oge a, ụdị nkwurịta okwu kachasị dị nchebe nke ọdịdị a bụ iji SSH kama Telnet. Agbanyeghị, gburugburu mmepe nke na-arụ na netwọkụ mpaghara dịpụrụ adịpụ Telnet nwere ike inye aka karịa. N'agbanyeghị nke ahụ, ị ​​​​gaghị agba ọsọ Telnet na netwọk ọha ụbọchị ndị a, ọ ga-emeghekwa ihe nkesa gị ruo a nnukwu ihe ize ndụ n'ime otú ahụ.
Categories Fedora Tags Fedora 35, Telnet Mail igodo
Otu esi etinye & hazie Git na Fedora 35